မီးတောင်အမျိုးအစားများ- ထူးခြားချက်များနှင့် ပေါက်ကွဲမှုအမျိုးအစားများ | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 24/11/2021 16:42 | ဘူမိဗေဒ
မီးတောင်များသည် ကမ္ဘာမြေအတွင်းပိုင်းမှ ထွက်လာသော မဂ္ဂနီများကို ဖယ်ရှားပေးသည့် ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိကြသည်။ Magma သည် ကမ္ဘာမြေကြီး၏ ဝတ်ရုံမှ ထွက်လာသော သွန်းသော ကျောက်တုံးကြီးတစ်ခုထက် မပိုပါ။ magma မျက်နှာပြင်ကို ရောက်တဲ့အခါ ချော်ရည်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အများအပြားရှိပါတယ်။ မီးတောင်အမျိုးအစားများ သူတို့ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ အဖုအမျိုးအစားအလိုက်၊
ဒီဆောင်းပါးမှာ တည်ရှိနေတဲ့ မီးတောင် အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးနဲ့ ပေါက်ကွဲမှုတွေက ဘာတွေလဲ ဆိုတာကို ပြောပြသွားမှာပါ။
1 မီးတောင်အမျိုးအစားများသည် ၎င်းတို့၏ လှုပ်ရှားမှုအလိုက်၊
2 မီးတောင် အမျိုးအစားများအလိုက် ပေါက်ကွဲကြသည်။
မီးတောင်အမျိုးအစားများသည် ၎င်းတို့၏ လှုပ်ရှားမှုအလိုက်၊
၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ လှုပ်ရှားမှု အမျိုးအစားအလိုက် မီးတောင်များ၏ အဓိက အမျိုးအစားများဖြစ်သည်။
အသက်ဝင်နေသော မီးတောင်။ ၎င်းတို့သည် မလှုပ်ရှားဘဲ အချိန်မရွေး ပေါက်ကွဲနိုင်သော မီးတောင်များဖြစ်သည်။ ဒါက မီးတောင်အများစုမှာ ဖြစ်တတ်ပေမယ့် ဥပမာအနေနဲ့၊ စပိန်၊ La Palma ရှိ Cumbre Vieja မီးတောင် (ယခု ပေါက်ကွဲ)၊ အီတလီ၊ စစ္စလီရှိ Etna မီးတောင် (လက်ရှိ ပေါက်ကွဲ) နှင့် ဂွာတီမာလာရှိ Fuego မီးတောင် (လက်ရှိ ပေါက်ကွဲနေသည်) တို့ကို ကိုးကားနိုင်ပါတယ်။ Costa Rica ရှိ Irazú မီးတောင်။
မလှုပ်ရှားနိုင်သော မီးတောင်။ ၎င်းတို့ကို အိပ်စက်သူများဟုလည်း ခေါ်ကြပြီး ၎င်းတို့သည် လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးသော မီးတောင်များဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးသော်လည်း၊ ရံဖန်ရံခါပေါက်ကွဲသည်။ ရာစုနှစ်များကြာ မီးတောင် ပေါက်ကွဲခြင်း မရှိသောအခါ မီးတောင်ကို ငြိမ်သွားသည်ဟု ယူဆပါသည်။ စပိန်နိုင်ငံ Canary ကျွန်းစုများရှိ Teide မီးတောင်နှင့် United States ရှိ Yellowstone စူပါမီးတောင်တို့သည် အငြိမ်မီးတောင်များ၏ နမူနာများဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဥပမာနှစ်ခုလုံးသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ရွေ့လျားမှုကိုပြသခဲ့ပြီး၊ ၎င်းတို့၏ဒေသတွင် အပျော့စားငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် "အသက်ရှင်နေသေးသည်" နှင့် တစ်ချိန်ချိန်တွင် တက်ကြွလာကာ မျိုးသုဉ်းသွားခြင်း သို့မဟုတ် နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းမပြုကြောင်း ညွှန်ပြခဲ့သည်။
မျိုးသုဉ်းသောမီးတောင်. ၎င်းတို့သည် နှစ်ပေါင်း 25.000 ကျော်ကတည်းက ပေါက်ကွဲခဲ့သည့် နောက်ဆုံးမီးတောင်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သုတေသီများက ၎င်းတို့သည် တစ်ချိန်ချိန်တွင် ပြန်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟု မဆုံးဖြတ်ထားပေ။ ဤနည်းလမ်းကို ၎င်း၏ magma အရင်းအမြစ်မှ ရွေ့လျားနေသော tectonic လှုပ်ရှားမှုကို မီးတောင်ဟုလည်း ခေါ်သည်။ ဟာဝိုင်အီရှိ Diamond Head မီးတောင်သည် မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး မီးတောင်တစ်ခု၏ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
မီးတောင် အမျိုးအစားများအလိုက် ပေါက်ကွဲကြသည်။
၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ပေါက်ကွဲမှုအရ တည်ရှိသော မီးတောင် အမျိုးအစားများ ဖြစ်ကြသည်-
ဟာဝိုင်အီ မီးတောင်များ။ ဤမီးတောင်များမှ ချော်ရည်များသည် အရည်ဖြစ်ပြီး မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း ဓာတ်ငွေ့များ မထုတ်လွှတ်ဘဲ သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲစေတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုသည် အသံတိတ်သွားသည်။ ဟာဝိုင်အီရှိ မီးတောင်အများစုတွင် အဆိုပါ ပေါက်ကွဲမှုမျိုးများ ရှိသောကြောင့် နာမည်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အတိအကျပြောရရင်တော့ Mauna Loa လို့ခေါ်တဲ့ ဟာဝိုင်အီမီးတောင်ကို ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
Strombolian မီးတောင်. ဖော်ပြထားသည့် မီးတောင်နှင့် မတူဘဲ၊ Strombolian မီးတောင်သည် ဆက်တိုက် ပေါက်ကွဲခြင်း အပါအဝင် ပေါက်ကွဲမှုများ အပါအဝင် ပျစ်ပျစ် စီးဆင်းနေသော ချော်ရည် အနည်းငယ်ကို ပြသထားသည်။ အမှန်မှာ၊ ချော်ရည်များသည် ပိုက်ထဲသို့ တက်လာသည်နှင့်အမျှ ပုံဆောင်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာကာ မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုသည် မီးတောင်ပစ်လွှတ်မှုဟုခေါ်သော တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းစုစည်းထားသော ချော်ရည်ဘောလုံးများကို ပစ်လွှတ်ရန် နှေးကွေးသွားပါသည်။ ဤမီးတောင်၏အမည်သည် အီတလီရှိ Strombolian မီးတောင်ကို ရည်ညွှန်းပြီး ၁၀ မိနစ်တိုင်း စည်းချက်ညီစွာ ပေါက်ကွဲလေ့ရှိသည်။
Vulcan မီးတောင်များ။ ဤအခြေအနေတွင်၊ ၎င်းတို့တည်ရှိနေသော မီးတောင်ကို ဖျက်ဆီးနိုင်သည့် အလွန်ပြင်းထန်သော ပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်သည်။ ချော်ရည်များသည် အလွန်ပျစ်ပြီး ဓာတ်ငွေ့များစွာ ပါဝင်သောကြောင့် ထူးခြားချက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အီတလီရှိ Vulcan မီးတောင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်၊ ထိုမီးတောင်လှုပ်ရှားမှုသည် ဤမီးတောင်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Pilian မီးတောင်။ ဤမီးတောင်များတွင် အလွန်ပျစ်သောချော်ရည်များပါရှိပြီး လျင်မြန်စွာခိုင်မာလာပြီး မီးတောင်ဝတွင် ပလပ်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အတွင်းဓာတ်ငွေ့မှ ထုတ်ပေးသော ကြီးမားသော ဖိအားသည် ဖြတ်သွားသော အက်ကြောင်းများကို ပွင့်စေပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ပလပ်ကို ပြင်းထန်စွာ ထုတ်ပစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဤမီးတောင်၏အမည်မှ ဆင်းသက်လာသော Martinique ရှိ Bailey Mountain မီးတောင်ကို ဖော်ပြနိုင်သည်။
ရေအားလျှပ်စစ်မီးတောင်. မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုသည် မဂ္ဂမာနှင့် မြေပြင် သို့မဟုတ် ရေမျက်နှာပြင်တို့ ပေါင်းစပ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ မဂ္ဂမာ/ရေ အချိုးပေါ်မူတည်၍ ရေနွေးငွေ့ အများအပြား ထွက်လာနိုင်သည်။ ဤမီးတောင်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားသည် စပိန်နိုင်ငံ Campo de Calatrava ဒေသရှိ မီးတောင်များတွင် အဖြစ်များသည်။
အိုက်စလန် မီးတောင်. ဤမီးတောင်အမျိုးအစားတွင်၊ ချော်ရည်များ စီးဆင်းပြီး မီးတောင်ပေါက်မှမဟုတ်ဘဲ မြေပြင်တွင် အက်ကြောင်းတစ်ခုဖြင့် ထွက်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ချော်ရည်ကုန်းပြင်မြင့်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဤမီးတောင်အများစုသည် Iceland တွင်ရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏အမည်ကို ရရှိခဲ့သည်။ တိကျသောဥပမာမှာ အိုက်စလန်ရှိ Krafla မီးတောင်ဖြစ်သည်။
မီးတောင် ရေငုပ်သင်္ဘော။ အံ့သြစရာကောင်းပေမယ့် သမုဒ္ဒရာအောက်ခြေမှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ မီးတောင်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သမုဒ္ဒရာပေါက်ကွဲမှုတွေဟာ အများအားဖြင့် အချိန်တိုပါတယ်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင် စွန့်ပစ်လိုက်သောချော်ရည်များသည် မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီး အေးသွားချိန်တွင် မီးတောင်ကျွန်းများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
မီးတောင်တစ်ခုစီတွင် ပေါက်ကွဲသည့် အမျိုးအစားကို အနည်းငယ် ပိုအာရုံစိုက်ကြည့်ကြပါစို့။ လေ့ကျင့်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်စပ်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ တည်ရှိနေသော ပေါက်ကွဲမှုအမျိုးအစားများကို ကြည့်ကြပါစို့။
ဟာဝိုင်ရီ- မီးတောင်သည် Pyroclastic ပစ္စည်းများစွာ (ဓာတ်ငွေ့၊ ပြာများနှင့် ကျောက်တုံးအပိုင်းအစများ ပူပြင်းသော ရောစပ်ထားသော ဓာတ်ငွေ့၊ ပြာများနှင့် ကျောက်တုံးအပိုင်းအစများ မရှိသောကြောင့် အရည်အနည်းငယ် ပျစ်သော ချော်ရည်များကို ထုတ်လွှတ်သည်။ ဓာတ်ငွေ့သည် တဖြည်းဖြည်း ထွက်လာသည်၊ ထို့ကြောင့် ပေါက်ကွဲမှုသည် သေးငယ်သည်။
Strombolian- မီးတောင်များသည် pyroclastic ပစ္စည်းကို ထုတ်လွှတ်သည်။ ပေါက်ကွဲမှုများသည် ကြိုကြားကြိုကြားဖြစ်ပြီး မီးတောင်သည် ချော်ရည်များ ဆက်လက်မထုတ်လွှတ်တော့ပေ။
Vulcanian: မီးတောင်သည် အလွန်ပျစ်သော အရည်အနည်းငယ်ဖြင့် ချော်ရည်များကို ထုတ်လွှတ်ပြီး အလွန်လျင်မြန်စွာ ခိုင်မာသည်။ ကြီးမားသော pyroclastic တိမ်တိုက်ပုံစံများနှင့် ပြာပမာဏများစွာကို ထုတ်လွှတ်သည်။ ၎င်းတို့သည် မှို သို့မဟုတ် မှိုများနှင့် ဆင်တူသော တိမ်များအသွင်ဖြင့် မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုများဖြင့် ထင်ရှားသည်။ လှုပ်ရှားမှုများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အပျက်အစီးများကို ထုတ်လွှတ်သည့် ရေငုပ်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုမှ စတင်သည်။ အဓိက မြင်ကွင်းတွင် မီးတောင်ဓာတ်ငွေ့များ ပေါကြွယ်ဝပြီး အနက်ရောင် တိမ်တိုက်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပျစ်သော မဂ္ဂမာ ပေါက်ကွဲခြင်း ပါဝင်သည်။
Pliniana သို့မဟုတ် Vesuviana: မီးတောင်သည် ချော်ရည်များ အလွန်ပျစ်ပြီး ပြင်းထန်စွာ ပေါက်ကွဲသည်။ ၎င်းကို ၎င်း၏ ပုံမှန်မဟုတ်သော ပြင်းထန်မှု၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဓာတ်ငွေ့ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့် ပြာများ အများအပြားထွက်ခြင်းတို့ဖြင့် လက္ခဏာဆောင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မဂ္ဂမာမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မီးတောင်ထိပ်ပြိုကျကာ မီးတောင်ပေါက်တစ်ခု ဖန်တီးသည်။ Prinia မီးတောင် ပေါက်ကွဲစဉ်အတွင်း ပြာမှုန်များသည် ကြီးမားသော နေရာများသို့ ပျံ့နှံ့သွားနိုင်သည်။ Pliny မီးတောင် ပေါက်ကွဲခြင်းကို အေဒီ 79 ခုနှစ်တွင် Vesuvius တောင်ပေါက်ကွဲမှုတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သော ထင်ရှားကျော်ကြားသော ရောမ သဘာဝပညာရှင် Pliny the Elder ကို အစွဲပြု၍ အမည်ပေးထားသည်။
တိုက်ခိုက်သူ- ဤမီးတောင်ကို ၁၉၀၂ ခုနှစ်တွင် မာတီနစ်ရှိ ပီလီမီးတောင် ပေါက်ကွဲပြီးနောက် လူထောင်ပေါင်းများစွာ သေဆုံးခဲ့သည့် မီးတောင်ဟု အမည်ပေးထားသည်။ ချော်ရည်များသည် လျင်မြန်စွာ စုစည်းကာ မီးတောင်ဝတွင် ပလပ်တစ်ခု ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဓာတ်ငွေ့အတွက် ထွက်ပေါက်မရှိသောကြောင့် မီးတောင်အတွင်း ဖိအားများစွာ ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ရာ မီးတောင်၏နံရံသည် ပုံပျက်လာပြီး နံရံနှစ်ဖက်စလုံးမှ ချော်ရည်များ ထွက်လာသည်။
ရေအားလျှပ်စစ်မီးတောင်- ၎င်းတို့သည် မြေအောက်ရေ သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်ရေများနှင့် မဂ္ဂမာတို့၏ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မီးတောင်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် “အရည်များဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့သည် ပိုမိုပေါက်ကွဲနိုင်သော်လည်း strombolian ပေါက်ကွဲမှုများနှင့် ညီမျှသည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် မီးတောင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးနှင့် ၎င်းတို့၏ ပေါက်ကွဲသံများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ဘူမိဗေဒ » မီးတောင်အမျိုးအစားများ